Cristiano Ronaldo oo kula taliyay Manchester United inay lasoo Wareegto Xidig ka tirsan Juventus | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Cristiano Ronaldo oo kula taliyay Manchester United inay lasoo Wareegto Xidig ka...
Cristiano Ronaldo oo kula taliyay Manchester United inay lasoo Wareegto Xidig ka tirsan Juventus
Manchester United xidigeeda Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhaadhicinayo saaxiibkiisa Federico Chiesa inuu ku soo biiro garoonka Old Trafford.
23 jirkaan ayaa soo jiitay indhaha intii lagu jiray koobkii Euro 2020 ee Italy wuxuuna durba ku faanayaa laba gool iyo hal caawin todobo kulan tartamada oo dhan oo uu u sameeyay Marwada Duqda ah.
Chiesa farsamo ahaan wali qandaraas ayuu kula jiraa Fiorentina – iyadoo Juventus ay waajib ku tahay inay soo iibsato weeraryahanka xagaaga 2022 – laakiin waxaa durba lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Turin.
Liverpool iyo Chelsea ayaa labadoodaba la saadaalinayay inay u dhaqaaqaan weeraryahanka, laakiin Ronaldo ayaa la filayaa inuu doonayo in xidigan u dhaqaaqo Old Trafford, iyadoo wakiilka Ivan Reggiani uu u sheegay CMIT TV : “Waxaan u maleynayaa inay jiraan culeysyo shisheeye oo aad u culus oo muhiim ah [Chiesa] .
“Chiesa waa ciyaaryahankii seddexaad oo tayo leh gudaha Talyaaniga waxaa jira 2-3 naadi oo ku soo qaadan kara 120-130 milyan. ”
Chiesa – oo sameeyay goolkii Lorenzo Pellegrini ee guuldarradii semi -finalka Nations League ee Spain ka soo gaartay Spain – ayaa hore u heestay 34 gool iyo 25 caawin 153 kulan oo uu xirnaa funaanadda Fiorentina.
Previous articleKooxaha Premier League oo ka carooday la wareegitaanka Newcastle United
Next articleSarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay DF iyo xog uu bixiyey
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Ilkay Gundogan iyo Oleksandr Zinchenko aysan diyaar u ahayn kulanka Axadda ee Premier League oo...